Cristiano Ronaldo Oo Loo Doortay Xidigii Ugu Fiicnaa Champions League Xili CIyaareedkii Hore
Abaalmarinta xidigii ugu fiicnaa Champions league xili ciyaareedkii 2015/16 Champions League ayaa la gudoonisyay Cristiano Ronaldo xalay kadib xaflad ka dhacay hoteelka AC Hotel La Finca. Kadib 16 gool uu ka dhaliyay tartankii dhamaaday
Tababaraha kooxda Chelsea ee Antonio Conte ayaa diyaar u ah in uu Stamfrod Bridge ka nadiifiyo difaacyada kooxdiisa ee qaab ciyaareedka liita soo bandhigay, waxaana difaacyada uu Conte u cadhaysan yahay ka mid ah
(Xamarweyne.com):-Kooxda Real Madrid ayaa xalay ku guuleysatay Koobka Eufa Super Cup kadib markii ay xalay iska hor imaadeen Kooxda Savila ee isla dalkaasi ka dhisan iyagoona uga adkaaday 3-2. Macalin Zidane oo dhawaan xilkaan
Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa ka hadlay sababta rasmiga ah ee ay kooxdiisa ugu liidato suuqa kala iibsiga ciyaartoyda isagoo aaminsan iney adag tahay in la helo ciyaartoy tayo leh, balse uusan wali
dr.yare August 7, 2016 0
Kooxda Liverpool ayaa 4-0 kaga adkaatay Barcelona oo ay xalay ciyaar ka tirsan koobka horyaallada caalamiga ah ku dhexmartay garoonka Wembley. Sadio Mane ayaa goolka koowaad u saxiixay Liverpool, kan labaadna waxa uu ahaa
SAWIRRO: Xulka Talyaaniga oo xalay guul ka gaaray Tartanka Qaramada Yurub
dr.yare June 14, 2016 0
(Xamarweyne.com):-Xili dalka Faransiiska uu si habsami leh uga socdo tartanka ciyaaraha kubada cagta ee qaramada Yurub ayaa waxaa xalay guul weyn gaaray xulka Dalka Talyaaniga oo taariikh fiican ku leh kubada cagta. Xalay abaare
(xamarweyne.com);-Kulan ka tirsan tartanka qaramada Yurub ee Kubada Cagta ayaa xalay dhexmaray xulalka dalalka Ruushka iyo Britain kaasoo kusoo dhamaaday 1-1 ,laakiin intii tartabnku socday waxaa dhacay dagaal dhexmaray taageerayaasha. Taageerayaasha Ruushka ayaa weerar
Waxaa Fiinaalaha Tartanka Champions League isugu soo haray Laba Madrid ee Atletico Madrid iyo Ream-Madrid markii samefiinalaha ay ka kala adkaadee kooxaha Byer Munich iyo Man City oo ka kala dhisan dalalka germany iuo
(xamarweyne.com):-Waxaa xalay ciyar aad u adkeyd yeeshay kooxaha Bayern Munich iyo Atletico Madrid kuwaasoo ciyaarayay lugta labaad ee semefiinaalaha tartanka Champions Leugue. Ciyaarta ayaa ku soo dhamaaday Bayern Munich 2 – 1 Atletico Madrid
(xamarweyne.com):-Kooxda iska yar ee Leicester City ayaa hanatay horyaalka dalka Britain markii xalay ciyaar adag oo dhex martay Chelsea iyo Totenham ay ku soo dhamaatay 2-2 taas ayaana go’aamisay in Leicester City hanatay tartanka